Ny lemaka mangatsiaka mankany amin'ny tsy firaikana: fampitandremana ho an'ny empaths rehetra - Blog
Fantatrao ve ny fihevitry ny harerahana fangorahana?
Izy io dia toe-javatra izay matetika iharan'ny mpikarakara toy ny mpitsabo mpanampy sy ny olona izay iharan'ny fijaliana na olona na biby. Be fangoraham-po sy fangoraham-po tokoa izy ireo amin'ny fahorian'olonkafa ka manjary tototry ny hatezerana tanteraka izy ireo ary tohina noho izany, ka mahatonga azy ireo hihemotra am-pientanam-po.
Izy io dia manadino sy mampihena ny fangorahany rehefa mandeha ny fotoana, ary mety hiteraka tsy fankasitrahana tanteraka amin'ny farany raha tsy voatazona amin'ny fikarakarana tena sy fitsaboana ara-dalàna.
Ny tena izy, ity traikefa ity dia tsy voafetra ho an'ireo izay miasa amin'ny paroasy trauma fotsiny dia tena toe-javatra tena misy izany empaths tolona amin'ny. Mifanentana tanteraka amin'ny fihetsem-pon'ny olon-kafa foana izy ireo, matetika, hany ka matetika no hany fomba hanavotana ny tenany amin'ny famelezana tsy an-kijanona dia ny 'mamoy fo.'
Ny fahatsapana ny fahatsapana sy ny fahatsiarovan-tena dia voasarika ho any anaty ary misy ampinga miaro hanakana ny onja tsy misy farany ny ratra, ny ahiahy, ny famoizam-po, ny hatezerana, ary ny fihetsem-po hafa izay tonga hatrany amin'ny empath tsirairay. Betsaka no mahatsapa fa safidy roa ihany no azony amin'ny toe-javatra toy izao: atsangano ireo rindrina, na hodorana tanteraka.
lisitry ny zavatra tokony hohafanaina
Ny faritra mampidi-doza
Maha-empath manana ny tombony azo avy aminy, nefa misy vidiny lafo ihany koa: rehefa tena mifanaraka amin'ny zavatra tsapan'ny olon-drehetra ianao, ny toe-javatra toy ny fanahiana mafy, ny fahaketrahana, ny tsy fihinanan-kanina, ary ny fanaintainana aza dia mety hiseho tsy tapaka, ary tsy misy miainga ao aminao io! Izy io dia toy ny onjan'ny riaka manaitaitra avy any ivelany midoboka ao aminao avy amin'ny lafiny rehetra ary toa tsy mamela izany mihitsy. Rehefa miatrika an'io karazana toe-javatra io ianao dia ny misintona sy mamorona cocoon miaro dia toa filokana faran'izay hendry sy azo antoka indrindra, sa tsy izany?
Eny, eny ary tsia. Hitanao, rehefa mametraka rindrina ny olona, ​​dia tsy mitazona ny fihetseham-po ivelany tsy hiditra ao aminy fotsiny - fa mitazona ny fihetsem-pony ihany koa. Empaths, izay mazàna maneho ny fangoraham-po sy ny fahatakaran'olombelona, ​​dia afaka mivadika ho automatique tsy miraika izay afaka manitsaka ny fatin'ny havany hanao sandwich fa tsy handatsa-eyelid.
Eny ary, angamba izany dia tafahoatra loatra, nefa mbola.
Ny fikatsoana sy ny fihemorana mankany anaty dia mampidi-doza toy izany amin'ny fahatsapana ara-pihetseham-po sy ara-tsaina toy ny hozatra manta sy miharihary izay zakan'ny herin'ny olon-kafa hatrany. Azo antoka fa mety hahatsapa ho azo antoka kokoa sy ahazoana aina kokoa ny ho moana, fa ianao kosa manimba tena kokoa noho ny tsara, ary mety hanimba ny olona manodidina anao koa ao anatin'izany.
ny fomba hampiononana olona sendra fisarahana
Amin'ny fanakatonana sy fambolena tsy firaikana fa tsy fiaraha-miory, dia mety tsy hanana ireo fifaliana kely mahatonga ny fiainanao ho mendrika hiainana ianao. Tianao ve ny mamaky? Sary? Mihazakazaka? Rehefa nakatona ianao, ny ankamaroan'ireo zavatra ireo dia tsy hisy dikany intsony ary mety ho moana fotsiny ianao eo alohan'ny fahitalavitra mandritra ny ora maro satria tsy afaka sorena ianao hanao zavatra hafa.
Ambonin'izany, rehefa manakana ny fihetsem-pon'ny olon-kafa ianao amin'ny fikasana hamonjy ny tenanao, dia hanakana ireo olona akaiky anao ihany koa ianao. Mety ho hitanao fa tsy te-hanome enta-mavesatra momba ny vadinao / mpiara-miasa aminao ianao, indrindra raha 'sahirana' ara-pihetseham-po eo imasonao izy ireo (izay ara-dalàna tanteraka rehefa misy olona manafaka olona iray).
Ny zanakao, raha manana ianao, dia mety ho lasa kisoa manintona tanteraka fa tsy ireo zaza marefo. Mety ho hitan'ny namanao fa tsy afaka miresaka aminao izy ireo satria ny zavatra rehetra lazainy dia manelingelina anao fotsiny, ary mety hampidi-doza anao ny fahaverezan'ny asanao satria tsy azonao atao ny mametraka fikarakarana na ezaka mafy amin'ny zavatra ataonao.
inona avy ireo mpandika fifanarahana sasany amin'ny fifandraisana
Amin'ny fialana amin'ny cocoon tsy miraika dia mety miantra amin'ny fanaintainana sy ny fimamoana be loatra ianao, saingy misoroka ny tenanao tsy hiaina marina ihany koa. Ho lasa vongan'olona tsy misy poaka ianao, mandehandeha mihetsika, fa tsy mahatsapa tena na miaina zavatra… ary izany dia mampalahelo fa tena misy tokoa.
Maninona ny tsy fahampian'ny fiaraha-miory no tsy hita ao amin'ny Narcissists sy Sociopaths fotsiny
Ady 11 amin'ny tolona isan'andro no atrehana
Ny lakile dia ny mahay mandanjalanja
Mety ho toa zavatra mora kokoa noho ny vita izy io, ary ny milaza fa mora ny mahay mandanjalanja dia ho setroka mandehandeha fantatrao izay, fa AZO atao, ary tena ilaina tokoa ny manao izany.
Misy marimaritra iraisana falifaly eo anelanelan'ny filan'ny fihetseham-pon'ny olon-kafa sy ny famoahana tanteraka ny tenanao, noho izany dia mila jerenao hoe inona ny tokonam-baravaranao raha toa ka mahay mandefitra ny fanafihana ianao, ary izay teknika mety indrindra amin'ny resaka fikolokoloana tena sy famenoana. .
Ny zavatra iray tena zava-dehibe tokony hatao dia ny manamarika ireo toe-javatra (sy ny olona) izay tatatrao ianao ny tena. Raha hitanao fa ny fitsangatsanganana any amin'ny toeram-pivarotana dia mamela anao te-handry amin'ny tany amin'ny puddle comatose mandritra ny andro vitsivitsy, dia angamba tsara kokoa ny tsy mandeha any. Toy izany koa, raha mandany anao ny fotoana laninao amin'ny namanao na olona iray ao amin'ny fianakavianao ary manova anao ho korontana sy mikorontan-tsaina, azonao atao ny mametra ny fotoananao miaraka aminy araka izay tratra.
miaraka amin'ny lehilahy manambady
Misy fangoraham-po sasany mitodika any amin'ny fidorohana zava-mahadomelina na alikaola mba hahafahany miady amin'ny banga mandatsaka olona feno poizina, saingy fanamboarana vonjimaika izay azo antoka fa hiteraka fahavoazana amin'ny fotoana maharitra. Isaky ny azo atao, mitazona fifamatorana fotsiny amin'ireo olona manatsara ny fiainanao - mianara mamela ireo izay manondraka sy manapoizina anao.
Ankoatry ny fisorohana ireo toe-javatra mampihena anao na miteraka fanaintainana anao, zavatra lehibe iray hafa azonao atao ny mamorona toerana ara-batana azo antoka hihemorana. Ny efitrano fatoriana dia mety, satria afaka manidy varavarana ara-bakiteny ianao ary manana toerana ho anao rehefa ilainao izany, indrindra raha manantona eo alohan ianao ny marika “aza manelingelina” goavambe mba hahafantaran'ny hafa fa mamela anao ho eo ianao rehefa ao Ery.
Handravaka ny habakanao amin'ny fomba milamina sy mangatsiaka, tsy mikorontana. Ny lokon'ny fotsy, ny famenoana ny loko, ny zavamaniry maintso ary ny jiro azo ahena na hazavaina arakaraka ny filanao dia afaka manampy be dia be.
Miala amin'ity toerana ity rehefa mahatsiaro ho trotraka ianao ary miezaha hifantoka amin'ny fofonainao. Raha hitanao fa very hevitra mora foana ianao dia manandrama misaintsaina. Izany dia hanampy anao hianatra hanavaka ny fihetsem-ponao manokana sy ny an'ny hafa, izay mety ho entinao nefa tsy tsapanao akory.
Ny fomba fanao meditative mampifandray anao amin'ny vatanao dia mety hahomby amin'ny fampitoniana ny maelstrom mampihetsi-po koa. Ny ankabeazan'ny empaths dia mitoetra ao an-dohany sy ny ara-panahin'izy ireo amin'ny ankamaroan'ny fotoana, noho izany ny famerenana miverina any amin'ny sehatra ara-batana dia mety hiteraka famantaran-toerana tena ilaina. Yoga sy Tai Chi dia fomba roa tena tsara mikotrika : tsy hoe mifandray ara-batana amin'ny tany fotsiny ianao rehefa manao posy sy fihetsehana, fa rehefa mifantoka tanteraka amin'ny zavatra ataon'ny vatanao, ary ny fomba mivezivezy anao, dia tsy ampijalian'ny fihetsem-pon'ny hafa ianao. Momba ANAO daholo izany: ny herinao, ny fitonianao, ny fiadananao.
avy aiza no ahazoan'i mr hayop vola?
Tsy misy raikipohy iray izay hiasa ho an'ny rehetra, satria samy hafa tanteraka ny tokonam-pihetseham-po sy ny hevitry ny famenoana tena. Mety mila manandrana karazana hafa ianao fiarovana sy teknika fikarakarana tena alohan'ny ahitanao ny lalana afovoany majika mifanaraka tsara indrindra, ary tsy maninona!
Raha nandany taona maro ianao tototry ny eritreritra sy ny fihetseham-pon'ny olon-kafa, dia mila fotoana kely hianarana ny fomba hanavahana izay anao sy izay azy ireo, ary koa handaminana izay mahatonga anao hahatsiaro ho voaro, sambatra ary salama.
Manaova fanatanjahan-tena rehefa afaka manao izany ianao, miezaha hihinana tsara, ary raha hitanao fa ny hipetraka ao anaty patalohao, ny mihinana fromazy sy mijery sary mihetsika dia ampahany amin'ny 'toerana falifanao', dia tsy maninona koa izany.
Tsy mitsara, eto.
ahoana no ilazana raha liana ny mpiara-miasa lahy
mahatsapa ho toy ny mila nitomany fa tsy afaka
famantarana ny fihenjanana eo amin'ny lahy sy ny vavy any am-piasana
reese witherspoon net mendrika 2017
inona ny tsy fivadihana amin'ny fifandraisana